UTOR « MMWeather Information BLOG
Leaveacomment Uncategorized စုစုပေါင်း မိုင် ၂၂၇ဝ ခန့် ခရီးနှင်ခဲ့သော UTOR
Leaveacomment Uncategorized UTOR-11W ကုန်းတွင်းလေဖိအားနည်းရပ်ဝန်းအဖြစ် တရုတ်-Hunan ပြည်နယ်သို့ ရောက်ရှိပြီးနောက် ပျက်ပြယ်သွားတော့မည်
Leaveacomment Uncategorized သြဂုတ်လ ၁၅ ရက်နောက်ပိုင်း မုတ်သုန်လေအားကောင်းပြီး အရှေ့တရုတ်ပင်လယ်တွင် အားကောင်းသည့်မုန်တိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပေါ်မည်
တောင်တရုတ်ပင်လယ်တွင် ဖြစ်ပေါ်လျှက်ရှိပြီး တရုတ်တောင်ပိုင်းကမ်းခြေအား ဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်ရန်တာစူလျှက်ရှိသည့် တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း UTOR(11W) ကုန်းတွင်းသို့ ဝင်ရောက်ပြီးနောက် သြဂုတ်လ ၁၅ ရက် – မြန်မာစံတော်ချိန် ၁၈း၃ဝ နာရီနောက်ပိုင်းမှ စတင်၍ အရှေ့တရုတ်ပင်လယ်(ထိုင်ဝမ်ကျွန်းအနီး)တွင် လေဖိအားနည်းဆဲလ်(INVEST) သို့မဟုတ် လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်းတစ်ခု ဖြစ်ပေါ်လာပြီး ပိုမိုအားကောင်းလာကာ အိုကီနာဝါကျွန်းစုတစ်လျှောက် ဂျပန်နိုင်ငံဘက်သို့ ဦးတည်ရွေ့လျားမည့် အားကောင်းသော မုန်တိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း GFS ကွန်ပျူတာမော်ဒယ် ခန့်မှန်းပုံဖေါ်ချက်တွင် တွေ့ရှိရပါသည်။
အဆိုပါအချိန်အတွင်း ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်နှင့် ကပ္ပလီပင်လယ်ပြင်အတွင်း မုန်တိုင်းဖြစ်နိုင်မည့် ခန့်မှန်းချက်မရှိသော်လည်း၊ အာရေဗျပင်လယ်၊ တောင်တရုတ်ပင်လယ်၊ ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်းနှင့် ကပ္ပလီပင်လယ်ပြင်တို့တွင် လေတိုက်နှုန်းမြင့်မားလာပြီး မုတ်သုန်လေအားကောင်းလာမည့် အခြေအနေများ ဖြစ်ပေါ်လာမည်ဟု ခန့်မှန်းထားပါသည်။
သြဂုတ်လ ၁၈ ရက် မြန်မာစံတော်ချိန် ဝ၆း၃ဝ နာရီတွင် ဖြစ်ပေါ်နိုင်မည့် အခြေအနေအား ကြိုတင် . . . → Read More: သြဂုတ်လ ၁၅ ရက်နောက်ပိုင်း မုတ်သုန်လေအားကောင်းပြီး အရှေ့တရုတ်ပင်လယ်တွင် အားကောင်းသည့်မုန်တိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပေါ်မည်
Leaveacomment Uncategorized မုန်တိုင်း UTOR-11W တရုတ်တောင်ပိုင်းကမ်းခြေအား ဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်တော့မည်
By mmweather.ygn, on August 13th, 2013%
အချင်းမိုင် ၃ဝဝ ကျော်ရှိသော တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း UTOR(11W)သည် သြဂုတ်လ ၁၃ ရက် မြန်မာစံတော်ချိန် ၁၉း၃ဝ နာရီတွင် တရုတ်(ပြည်မ) Guangdong ပြည်နယ်၊ Maoming မြို့ အရှေ့တောင်ဘက် မိုင် ၂၁ဝ ခန့်၊ မကာအိုမြို့ တောင်ဘက် ၁၉၅ မိုင်ခန့်၊ ဗီယက်နန်နိုင်ငံ ဟနွိုင်းမြို့ အရှေ့-အရှေ့တောင်ဘက် မိုင် ၅၅ဝ ခန့် တောင်တရုတ်ပင်လယ်ပြင်တွင် ဗဟိုပြုနေပါသည်။
မုန်တိုင်းသည် မြန်မာစံတော်ချိန် ၁၈း၃ဝ နာရီ မတိုင်မီ အနောက်မြောက်ဘက်(Heading 300˚)ဖြင့် ရွေ့လျားခဲ့ပြီး Heading 312.6˚(မြောက်ဘက်အနည်းငယ် ယွန်း၍) ဆက်လက်ရွေ့လျားကာ သြဂုတ်လ ၁၄ ရက် မြန်မာစံတော်ချိန် နံနက် ဝ၆း၃ဝ နာရီ၌ Maoming မြို့ အရှေ့တောင်ဘက် . . . → Read More: မုန်တိုင်း UTOR-11W တရုတ်တောင်ပိုင်းကမ်းခြေအား ဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်တော့မည်
Leaveacomment Uncategorized တောင်တရုတ်ပင်လယ်အတွင်းဖြတ်သန်းပြီးနောက် မကာအိုအနီးမှ ကုန်းတွင်းဝင်ရောက်မည့် တိုင်ဖွန်း UTOR-11W
By mmweather.ygn, on August 12th, 2013%
တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း UTOR-11W (ဖိလစ်ပိုင်အမည် LABUYO) သည် အဆင့်-၂ တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း အဆင့်ဖြင့် တောင်တရုတ်ပင်လယ်အတွင်း ရောက်ရှိလာပြီး အနောက်မြောက်ဘက်(Heading 292.48˚)သို့ တစ်နာရီ ၁၅ မိုင်နှုန်းခန့်ဖြင့် ဆက်လက်ရွေ့လျားလျှက်ရှိပါသည်။ ခန့်မှန်းချက်အရ သြဂုတ်လ ၁၄ ရက် မြန်မာစံတော်ချိန် ဝ၆း၃ဝ နာရီ နောက်ပိုင်းတွင် မုန်တိုင်း UTOR သည် ဗဟိုလေပြင်းတိုက်ခတ်နှုန်း 110 knots(တစ်နာရီ ၁၁၅ မိုင်နှုန်းဖြင့် မကာအိုမြို့ အရှေ့ဘက် မိုင် ၁၇ဝ ခန့် အကွာရှိ တရုတ်-Guangdong ပြည်နယ် မှ Maoming မြို့ပေါ်မှ ဖြတ်ကျော်၍ ကုန်းတွင်းသို့ဝင်ရောက်မည်ဖြစ်ကြောင်း ခန့်မှန်းထားပါသည်။
Super Typhoon UTOR (LABUYO) weakens after it made . . . → Read More: တောင်တရုတ်ပင်လယ်အတွင်းဖြတ်သန်းပြီးနောက် မကာအိုအနီးမှ ကုန်းတွင်းဝင်ရောက်မည့် တိုင်ဖွန်း UTOR-11W
Leaveacomment Uncategorized UTOR အဆင့်-၂ တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း အဆင့်ဖြင့် တောင်တရုတ်ပင်လယ်သို့ စတင်ဝင်ရောက်လျှက်ရှိ
တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း 11W UTOR (ဖိလစ်ပိုင်အမည် LABUYO) သည် ဝြဂုတ်လ ၁၂ ရက် နံနက်ပိုင်းတွင် ရရှိသည့် အချက်အလက်များအရ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ၊ BAGUIO CITY ၏ မြောက်ဘက် ၁၂ မိုင်ခန့်အကွာမှ ကပ်၍ ဖြတ်သန်းလျှက်ရှိပါသည်၊ မုန်တိုင်းဖြတ်သန်းစဉ် အဆင့်-၂ တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း(CAT-2 TYPHOON) အဖြစ် လေပြင်းတိုက်ခတ်နှုန်း 95 knots(တစ်နာရီ မိုင် ၁၁ဝ ခန့်)ဖြင့် ဖြတ်ကျော်လျှက်ရှိပြီး ယခု သတင်းရေးသားချိန် မြန်မာစံတော်ချိန် နံနက် ၁ဝး၃ဝ နာရီတွင် San Fanando City ပေါ်မှ ဖြတ်၍ တောင်တရုတ်ပင်လယ်သို့ စတင်ဝင်ရောက်လျှက်ရှိပါသည်။
12 Aug 2013 0000Z Location: 16.5 120.8 Winds: . . . → Read More: UTOR အဆင့်-၂ တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း အဆင့်ဖြင့် တောင်တရုတ်ပင်လယ်သို့ စတင်ဝင်ရောက်လျှက်ရှိ